netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:Cancellation & returns
Netzay.com.mm မှကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချပေးရာတွင် ရောင်းချသောကုမ္ပဏီများနှင့် netzay.com.mm တို့အကြားခိုင်မာသောသဘောတူညီမှုများနှင့် အာမခံချက်များ ရယူထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း အာမခံချက် အပြည့်အ၀ပေးနိုင်ပါသည် ။
Netzay.com.mm မှ ဈေးဝယ်သူများ အဆင်ပြေရေးကို နံပါတ်တစ် ဦးစားပေး၍ စေတနာရှေ့ထားကာ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိရာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆင်မပြေမှုရှိပါက ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်လဲယူနိုင်ခြင်း၊ ငွေပြန်အမ်းပေးခြင်း စသည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးသွားပါမည် ။
ဘယ်လို ပစ္စည်းမျိုးကို ပြန်လဲနိုင်မှာလဲ ?
netzay.com.mm မှ မှာယူလိုက်သော ပစ္စည်းများကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ
အနာအဆာ ပါရှိလာခြင်းတို့ဖြစ်ပါက ထိုပစ္စည်း၏မူလထုတ်ပိုးမှု ပုံစံမပျက် netzay.com.mm သို့ အခမဲ့ ပြန်လည်ပေးပို့လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ (သို့) တူညီသောငွေပမာဏပြန်အမ်းပေးပါမည် ။
ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်း လဲလို့ရတာလဲ ?
ပစ္စည်းလက်ခံရရှိပြီး ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လို ပြန်လဲရမလဲ ?
သင်၏ အော်ဒါနံပါတ်, ပြန်လည်ပေးပို့လိုသော ပစ္စည်း, ပြန်ပို့လိုသော အကြောင်းအရင်းနှင့် ပြန်အမ်းငွေတန်ဖိုးကို Customer Service ph : 09 2570 60001 ( သို့ ) services@mmnetzay.com သို့ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည် ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ ဖြစ်လျှင် ပစ္စည်းလာပြန်ယူပေးမည်ဖြစ်ပြီး အခြားနယ်များမှဖြစ်ပါက Customer service မှ မည်သို့ပေးပို့ရမည်ကို လမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပစ္စည်းပြန်လည်ရောက်ရှိပါက သင်ပြန်လည်ပေးပို့ရခြင်း အကြောင်းအရင်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပြီး ကိုက်ညီမှု ရှိခဲ့လျှင် သင့်အား ပစ္စည်းအမှန်နှင့်ပြန်လဲပေးခြင်း (သို့) ပြန်အမ်းငွေထုတ်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးပါမည် ။ မကိုက်ညီပါက သင့်အားအကြောင်းကြားပြီးပြန်လည်ပို့ဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သတိပြုရန် - ပစ္စည်းပြန်လည်ပေးပို့ရာတွင် မိမိပြန်ပို့လိုသော ပစ္စည်းမှာ နဂိုရရှိစဉ်ကအတိုင်း ထုတ်ပိုးမှု နှင့် အပိုပစ္စည်းအစုံအလင်ပါဝင်ရမည့်အပြင် အသုံးပြုထားခြင်း မရှိရပါ။
၇ရက်ကျော်သွားပြီးမှ ပျက်နေမှန်းသိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
ပစ္စည်းလက်ခံရရှိချိန်မှစပြီး ၇ရက်ကျော်လွန်သွားပါက ပြန်လည်ပေးပို့၍ မရနိုင်ပါ။ သို့သော် ကုန်ပစ္စည်းမှာ နဂို ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်နေပါက အာမခံပေးထားသော ရောင်းချသူထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ရောင်းချသူအား ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုကို သဘောကျနှစ်သက်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် …..ပျော်ရွှင်သော နေ့လေးဖြစ်ပါစေ ..
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် မေးမြန်းလို၍ဖြစ်စေ၊ အကြံဥာဏ်ပေးလို၍လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များ ကို သိရှိလို၍လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့Customer ၀န်ဆောင်မှု အဖွဲ့၏ ဖုန်းနံပါတ် 09 2570 60001 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ .